3 Agba Smart Tecar Radio Frequency RF Skin na-adụchi ST02
1.Wrinkle mwepụ 2.Skin tightening 3.Pain Manegement 4.Muscle Relaxation
Shock Wave Therapy ultrasonlc Akwara Paln iwepụ
Ọgwụ Shock apụtawo dị ka nhọrọ ọgwụgwọ ga-ekwe omume maka ndị ọrịa nwere nsogbu akwara na-adịghị ala ala. Usoro a na-eji ma ikuku ikuku ma ọ bụ ikuku elektrọnik na-ebute ebili mmiri na ahụ iji nyere aka na-agwọ ọtụtụ nsogbu na-adịghị ala ala, gụnyere: Plantar fasciitis, Calcific tendo ...
660nm ntutu isi igwe mma ntutu isi ntutu isi ntutu ntutu isi
Agwọ ntutu Laser bụ ọgwụ na-abụghị ọgwụ, ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ nke a na-ejikarị maka ọgwụgwọ ntutu isi. (usoro ọgwụgwọ laser dị ala) na-ebute site na ngwaọrụ nke nwere ogwe nke lasers nke na-enwu n'isi. Ọ bụ elu-ọgwụgwụ laser ntutu ọnwụ usoro, dabere na 660nm ala -...
Ná mmalite nke afọ ọhụrụ 2021, Zohonice Hapụ Big Promotion hot-elling Mma Equipment ụdị. Ọ gụnyere igwe mgbochi ging 4DHIFU Ultra / Fractional CO2 Laser, nchọpụta ihu anụ miri emi na-ehicha igwe -Oxge Hydro, Tattoo Removal Wrinkle Removal Professional Q-Switch ND YAG l ...